China pp corrugated osisi nche Manufacturer na Supplier | Sihai
A na-eji pp corrugated osisi pp corrugated osisi nche, ọ bụ ihe nchebe maka seedling osisi, obere osisi. Ke akpa ogbo nke seedling akuku, ikike iguzogide oyi na ifufe bụ ogbenye, na ọ dị mfe a ga-eri site na ụmụ anụmanụ. Ya mere, nchebe jikoro na-adịkarị mkpa iji hụ na uto ahụike nke seedlings. Pp oghere osisi sapling nchebe nwere ike ahaziri dị ka chọrọ, ezi uche Ọdịdị imewe, ezi kwụsie ike, ike ifufe na-eguzogide, ezi mkpuchi mmetụta, adịghị mfe imebi na mmiri, ukwuu ịgbatị ọrụ ndụ, n'ụzọ dị irè zere ụmụ anụmanụ na-atacha na sapling, mfe kwalite ma jiri.
Nke gara aga: pp oghere mpempe akwụkwọ silk spins oyi akwa